Esihlokweni esithi, "Yiziphi izithelo eziwusizo kakhulu ubuhle" sizokutshela izimfanelo ezimangalisayo zezithelo. Kuyinto enempilo, enomnandi, enhle, enhle, ekhanyayo nasekuseni. Futhi lokhu banenjabulo enkulu babelana nabantu, bajabulele ubuhle babo bemvelo futhi badla amandla abalulekile.
Ewusizo futhi enhle kakhulu
Ama-Mandarin, i-kiwi, i-peaches, ama-orang, amapheya njalonjalo. Ngingakanani ongayenza kusuka ezidliwayo zezithelo ezimnandi. Akukho mkhawulo kumnandi: ungangezela ku-risotto, engeza kumsousse, ukwakha isaladi eyinkimbinkimbi, ubhake ku-foil. Futhi injabulo enjalo ngeke ibe ngaphansi uma nje udla lezi zithelo. Kodwa-ke, ingcebo enkulu yezithelo yi-microelements, amavithamini, esingayithola uma sijabulela ukuvutha okumnandi kwe-quince, ukuthambisa okunamanzi kwama-apula. Isibonelo, i-ananasin iqukethe: i-fibre, i-iodine, i-chlorine, i-magnesium, i-fibre, amaprotheni, amaqembu amavithamini A, B, C. Kuvela ukuthi labo ekudleni kwabo kuhlanganisa izithelo eziningi, banakekele impilo yabo, ngakho-ke banakekele ubuhle angeke abe ngaphandle kwempilo enhle kakhulu.
Ukuvumelana kwalesi sibalo
Izithelo zisiza amantombazane ayenamafutha. Ngenxa yokuthi ziqukethe i-fiber ephakeme, zingathuthukisa ukugaya, ukusiza ukunciphisa isisindo nokusiza ukuhlanza umzimba wezinto ezimbi. Ukudla okuhlukile kudinga ukukhetha izithelo ezingenayo izithelo. Ukuze ususe amakhilogremu engeziwe, ama-grapefruit nama-apula ezinhlobonhlobo ezimuncu zihle. Kuphela udinga ukwazi ukuthi ngesikhathi sokudla udinga ukuphuza okungenani amalitha amabili amanzi ngosuku. Kodwa ukuhlukunyezwa ngale ndlela yokulahlekelwa isisindo akufanelekile. Indlela engcono kakhulu yokudla izithelo izinsuku ezintathu, bese ubuyela kwimenyu evamile.
Imfihlo elandelayo yithonya lezithelo abanalo esimweni sezipikili. Uma le manicure engeyona enhle kakhulu, i-lemon izosindisa. Ngemuva kwezinsuku ezingu-7 noma ezingu-10, sigubha izipikili nge-lemon, bese umphumela ungathathi isikhathi eside. Khona-ke izipikili ziqiniswa, azidilizi, azihlukanisi, aziphuli, azikho izindawo ezimnyama ezipikili, futhi noma yimuphi owesifazane uzoba nomhawu nge-glitter yezipikili. Uma kungekho ukubekezela, isifiso nesikhathi sokwenza izinqubo ezinjalo, khona-ke enkonzweni yakho kuyoba ngamafutha abalulekile emononi. Inikeza izipikili ezishintshile umbala, futhi zibuyela ezipikili ubuhle bazo bemvelo. Umkhiqizo ukhathalela kahle i-cuticle kanye nesikhumba sezandla, kwenza isikhumba sibe nethenda futhi sithande.
Isikhumba sithanda imaski yezithelo. Ukupheka okwenziwe ngesisekelo se-lemon, i-bleach, ukukhipha ubuso, ukunikeza ubuhle nobumusa. Thatha ijusi lesigamu sesithelo bese uluxuba ngezipuni ezimbili ze-oatmeal, isipuni sosawoti omuncu. Faka isicelo seminithi engu-15 noma engu-20 entanyeni nobuso, bese ususa imaski bese ugeza ngamanzi apholile. Futhi imaski enjalo, isibonelo, njengenyama ye-apula, lapho sifaka khona i-spoonful yamafutha omnqumo, izonikeza isikhumba ukubukeka okunempilo futhi izovuselela isikhumba kahle. Ngokusekelwe ezikhwameni zezithelo ezahlukene kwenza imikhiqizo yezithokozi, bayayinakekela kahle ubuso futhi basize ukubhekana nezinkinga ezihlukahlukene.
Uma une-lotion yokuhlanza ehlanzekile necacile iseduze, ungasho ukuthi ukukhanya kukhanyisa isikhumba. Umphumela walolu lotion usekelwe ezakhiweni eziyingqayizivele zegromegranate, i-lime, i-grapefruit, i-lemongrass. Imikhiqizo equkethe iziqhumane ezinjalo iyisakhiwo esiyingqayizivele sesintu. Le mikhiqizo ivumela isikhumba ukuba sijabulele izimfanelo ezibalulekile zezithelo, nakuba singazange sibe nomzamo kuwo.
Isibonelo esihle saleso sithelo yikuthola okungokoqobo ukunakekelwa kwezinwele. Lapho ama-extracts of ikhadoni, i-apula, amagilebhisi, i-orange nezinye amajikijolo nezithelo zengezwe, khona-ke imikhiqizo enezindawo eziphawulekayo ziyadalwa. Shampoo Shamtu inikeza izinwele zezinwele futhi unikeza ukunambitheka kwemango, i-mandarin, i-kiwi. Enye imfucuza ye-Herbal Essences Fruit Fusions ibuyisela ubuhle bezinwele futhi igcwalise ubungqabavu ngenxa yamakhiwane, ama-kumquat, ama-kiwi ngezinwele ezinamafutha, nezinwele ezivamile ngenxa ye-persimmons, i-lychees, igromegranate. Imikhiqizo enjalo ithuthukisa izinwele, inakekele isiqholo, futhi ihlanze izinwele zezingcola.
Inqwaba ye "izithelo zokupheka" ezengeza ukukhangisa kanye nenhle. Ahlukahlukene amanzi yangasese kanye namafutha, okuyinto ehambisana nesithombe abesifazane besithelo, amafutha amnandi. Futhi akumangazi ukuthi abesifazane emhlabeni jikelele bathemba impilo nobuhle nazo zonke izinto imboni yobuhle ezikhiqizayo, ngokusekelwe ngezithelo.
Izakhamuzi zithi izithelo ezilandelayo kanye namajikijolo ziwusizo emzimbeni:
Ziqukethe i-beta-carotene, emzimbeni ephenduka i-vitamin A, futhi empeleni i-vitamin A iyinzuzo yokubona futhi ivikela umdlavuza. Emabhilikisini angakapheli, i-beta-carotene iqukethe okuningi, ngakho-ke udinga ukukhetha izinto ezinzima. Ama-apricot anesisindo se-potassium, ewusizo kakhulu enhliziyweni, kanye ne-magnesium ne-phosphorus, okudingekayo emsebenzini wobuchopho, i-calcium, edingekayo ohlelweni lwezinzwa nangomsebenzi wemisipha.
Ubhanana buwusizo emsebenzini wenhliziyo futhi kuyadingeka ekuvimbeleni izifo zenhliziyo, ngoba zicebile nge-potassium, futhi kuyadingeka ukuze usebenze ngokujwayelekile kwemisipha. Ubhanana buqukethe i-vitamin C namavithamini B, okudingekayo emsebenzini wesimiso sezinzwa kanye nezicubu ze-muscle, i-ephedrine, ine-tonic effect, iqukethe ama-catecholamines, ayasiza emathunjini nasesisu.
Iqukethe ama-antioxidants anamandla - ama-bioflavonoids, asebenza ngokumelene nezicubu zomdlavuza. Amagilebhisi aqukethe i-fructose ne-glucose, asiza inhliziyo ukuba isebenze ngokujwayelekile. Kuyasiza ukumelana nokucasula nokulala. Izithelo ezicebile ku-boron, ama-manganese, i-magnesium, i-potassium, insimbi, isiza ukudlulisa i-oksijeni ku-tissue, inothile ensimbi. Izithelo eziwusizo ziyasetshenziswa ohlelweni lwezinzwa, inhliziyo, amaphaphu, amathambo. Iqukethe izikhathi eziyisishiyagalombili ushukela ngaphezulu kunezivini.
Amakhiwane anezinhlobo eziningi ze-fiber, ushukela, i-calcium, i-potassium, i-carbohydrate namavithamini A, C, B. Iwusizo izinso, isisu, izitsha nenhliziyo. I-Vitamin B6 ikhiqiza i-serotonin, i-hormone ejabulisayo. Amakhiwane angaphansi kwe-cholesterol futhi anciphise ukudla.
I-Cranberries iqukethe ama-microelements amaningi namavithamini. I-cranberry juice iyasiza ekulwa nezifo, kuvimbela ukwanda kwama-bacteria. I-Cranberries iyasiza kuma-pancreas, isirabhu futhi iyasiza izinso.
Ucebile amavithamini B, C noP ukwandisa ukusebenza kahle, kusiza amangqamuzana omzimba omzimba ukulwa nezifo ezihlukahlukene.
Ucebile nge-potassium, insimbi, i-fibre yokudla, i-acids ephilayo, amavithamini weqembu A, B ne-vithamini C. Ivuselela umsebenzi wezinso namathumbu, kuyasiza ekuqedeni umbono we-twilight. Emangeni kune-potassium eningi, ewusizo emithanjeni yegazi.
I-Musk melon igcwele potassium, i-beta-carotene, iqukethe i-vitamin C. eningi.
Manje siyazi ukuthi yiziphi izithelo eziwusizo kakhulu ubuhle. Ukulandela izeluleko zethu ezilula, nokudla izithelo, ungathuthukisa impilo yakho, futhi usebenzise izithelo ukugcina ubuhle bakho.
Kudla ngaphambi kokuqeqeshwa - ku-gym
Kulimaza futhi kuzuze amanzi amaminerali abiziwe
Yini ebangela ukungabi nensimbi emzimbeni
I-Japanese horseradish wasabi
Izinongo: amaminithi nama-pluses
Ivolumu elimnandi: khetha ingubo yomshado enhle
Isaladi kusuka ku-courgettes namantongomane
Ukuchazwa kwephupho lapho uhamba khona esitimeleni
Pocket Muse ekubuyiseleni i-tattoo
Ukuthuthukiswa kobuntu, ukuqinisekiswa kokuzethemba
Amaski ebuso lokuhlanza ngokwemvelo
Umdanso we-Bachata - inhlanganisela yesimo sengqondo nomlingo
Ukwelashwa kokungqubuzana komzimba ngamakhambi omuntu
Amakhukhi e-oatmeal ane-chocolate emhlophe
I-pilav yaseTurkey esuka ku-Bulgur
I-Horoscope ka-2010: uphawu luka-Aquarius
Ukuthengwa kwefenisha ekhaya: itafula
Ngqolowa nemifino - inani lomuntu
Indoda enhle kakhulu - ikhekhe "i-Zebra" etafuleni lasekhaya